Global Voices teny Malagasy » Ny TIC Ho Fampandrosoana Any Afrika Miteny Sy Mampiasa ny Teny Frantsay · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 29 Mey 2017 5:00 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika (fr) i Claire Ulrich, Candy
Sokajy: Borkina Faso, Kamerona, Madagasikara, Mali, Senegal, Tchad, Togo, Fampandrosoana, Fanabeazana, Mediam-bahoaka, Tanora, Teknolojia, Tontolo_iainana, Ny hoavin'ny TIC ho amin'ny fampandrosoana
[Rohy amin'ny teny frantsay] Na dia voamarika tsy azo lavina aza ny fisian'ny fihazakazahan'ny NTIC (Teknolojia Vaovaon'ny Fampahalalambaovao sy ny Fifandraisana) ho an'ny fampandrosoana ao Afrika miteny sy mampiasa ny teny Frantsay, nbola azo lazaina ho tratra aoriana ihany io ampahan'i Afrika io raha oharina amin'ireo nàmany miteny sy mampiasa ny teny Anglisy. Ny fahitàna io fahataràna io dia avy amin'ny asa nataon'ireo bilaogera marobe miteny sy mampiasa ny teny frantsay  izay afaka vakiana ao amin'ny bilaogy Franco Techno Gap .
Tsy dia hita soritra loatra ny anton'ìo fahataràna io, saingy misy fanazavana vitsivitsy aroso tsindraindray : 1) ny governemantan’ireo firenena afrikana miteny sy mampiasa ny teny anglisy  toa an'i Afrika Atsimo, Maorisy, Ejipta, no nandroso aloha ny aterineto haingam-pisosa. Vokatr'izay, amin'ny ankapobeny dia lafo be ny vidin'ny fidirana amin'ny aterineto  any Afrika miteny sy mampiasa ny teny frantsay, araka ny hita ao amin'ny tranonkala atelier des médias  (RFI). 2) Raha ampifandraisina amin'ny fanazavàna teo aloha: “Toa haingana be ny firoborobon'ireo firenena miteny sy mampiasa ny teny anglisy  raha miohatra amin'ny miteny sy mampiasa ny teny frantsay” hoy i Miquel, bilaogera. 3) ny teny anglisy hatrany no teny atolotra anao voalohany manerantany raha vao resaka teknolojian'ny fampahalalambaovao sy fifandraisana.
Ao anatin'ity fitetezana bilaogy ity, jerentsika ireo tetikasa vitsivitsy eo an-dàlam-.panatanterahana amin'izao fotoana izao any Afrika miteny sy mampiasa ny teny frantsay, izay misy ampahany betsaka idiran'ny NTIC.
Ny bilaogy itambarambe ‘ Sendikàn'ireo Vehivavy Tantsaha ao Afrika Atsinanana sy ao Tsady  (UFROAT) dia manoritsoritra ireo tanjon'ny fikambanany  tahaka izao:
-Fampiroboroboana ny fifanakalozana hevitra eo amin'ny samy vehivavy tantsaha manerana ny firenena sy any amin'ny faritra,
-Fampiroboroboana ny fandraisana anjara ary ny fahitàna ny vehivavy tantsaha any anatin'ireo sampana rehetra fandraisana fanapahankevitra,
– Fampiroboroboana ny fitadiavana lalambarotra ho an'ireo vokatry ny vehivavy tantsaha.
Ao anatin'ity lahatsary manaraka ity, hazavain'i Agnegue Enyo from Togo fa noho ny atrikasa iray fanofànana momba ny NTIC natao tsy ela akory izay, mahay mamorona, mikirakira ary mamoaka tatitra elektronika momba ny tetikasany izy. Nambarany fa tany aloha dia tsy maintsy manakarama olona izy mba hanao ‘scan’ ny taratasy rehetra, handrakitra azy ireny, ary handefa ireo tatitra ataony. Tsy izany intsony ankehitriny.
Tetikasa tsy misy hafa amin'izany ny ao Madagasikara, Bekoto Paysans, dia miezaka ny hitahiry ny zon'ireo Malagasy tantsaha , manolotra ny momba ny asan'izy ireny sy ireo fanamby atrehany isanandro. Bekoto, Malagasy iray mpihira fantadaza, no mitarika ilay tetikasa. Mpikambana ao anatin'ilay tarika tsy tontan'ny ela Mahaleo  izy. Bekoto dia manoratra fa ireo tantelin'i Madagasikara sy ny ranon-tantely vokariny dia manana toetra mampiavaka azy manokana,  saingy tandindonin'ny faharingànana izy ireo.
Manana ny mampiavaka azy manokana ny tantelin'i Madagasikara. Karazana tantely tsy misy afa-tsy eto Madagasikara io ary raisina ho toy ny ” miasa mafy sy am-pilaminana “. Nisy vanimpotoana izay nanondranan'i Madagasikara ny tanteliny ho any Eoropa ary “aman-taonina maro no nalefa tany ivelany teo anelanelan'ny 1920 sy 1940 [..] Nanomboka tamin'ny nahitàna ny soritraretina Varroa namely ny fiompiana tantely tao amin'ny faritra Analamanga tamin'ny 2007 , dia hita tany amin'ny morontsiraka atsinanana koa ireo soritraretina ireo : ‘ Levona ireo andian-tantely …tsy manidina intsony ireo tantely ary niha-foana ny tranon-tantely, saingy mahavita manohitra ilay aretina ireo tantely dia.
Manoratra momba ny fanamby apetraky ny fampidirana ny NTIC ho ao anatin'ny sehatry ny fanabeazana any aminà firenena dimy ao Afrika atsimon'i Sahara (Benin, Kamerona, Ghana, Mali et Senegaly) i Djénéba Traoré. Manipika izy hoe  :
Ankehitriny, tsy ilaina ny hanaporofoana hoe mandray anjara amin'ny fanatsaràna ny kalitaon'ny fanabeazana ao Afrika ny fampidirana ny TIC, fa ny famaritana ireo làlana sy fitaovana afaka mampaharitra ny fampiasàna ny TIC any an-tsekoly, any amin'ny sekoly rehera no ilaina. Izy io (ny fanadihadiana) dia nanamafy ihany koa fa ny fanofanana ireo mpampianatra hikirakira ny teknolojia vaovao dia tsy laharam-pahamehan'ny sekoly sy ny fanjakàna, ary ny fampiasàna ny TIC ho amin'ny fampianarana, na ho an'ny mpampianatra, na ho an'ny mpianatra dia tena ambany be tokoa ao Afrika Andrefana sy Afovoany.
Fenoin'i Camedevelop  ny tombana nataon'i Djénéba Traoré ho an'i Kamerona. Tsipihany fa ny Fampianarana Fanofanana Mpampianatra (Ecole Normale) ao Yaoundé tsy mbola namoaka hatramin'izao manampahaizana manokana amin'io sehatra io, izay miteraka tsy fahampian'ny mpampianatra. Ny tsy fisian'ny herinaratra any amin'ireo faritra ambanivohitra sy ireo fepetra “kafkaïennes” mba hampidirana ny solosaina ho any an-tsekoly, ho azy, no antony fototra miteraka fahataràna amin'ny fampidirana ny NTIC any an-tsekoly.
Boukary Konaté  manolotra vaovao maha-be fanantenana kokoa momba ny NTIC ao anatin'ny fanabeazana any Mali. Boukary Konaté dia nikarakara atrikasa iray NTIC ho anìireo mpampianatra tao Bamako, Mali . Porofoin'ity lahatsary manaraka ity ny fahalinan-dry zareo hianatra ireo teknolojia vaovao :
Tanisain'i Boukary Konaté ihany koa ny fomba ataon'ireo tovovavy eny amin'ny lisea nahafahan'izy ireo naka torohay momba ny andriamby manana tendro roa  tamin'ny fianarana manao fikarohana tsotra tao amin'ny Googe. Marihan'ireo mpianatra ireo ihany koa ireo tombontsoa hafa azo amin'ny fampiasàna NTIC: ny fahafahana mizara vaovao amin'ireo mpianatra hafa ao an-dakilasiny, ny fikarakarana mora foana ireo fihaonana, izay ahafahan-dry zareo mampihena ny vola aloa amin'ny antso an-telefaona.
Tsy azo lavina ny fisian'ireo ezaka any Afrika miteny sy mampiasa ny teny frantsay mba hampidirana ny NTIC ho any anatin'ireo tetikasam-pampandrosoana, ary tsy voafetra fotsiny ho an'ireo tetikasa notanisaina ery ambony. Kanefa, miatrika fahasarotana toy ny atrehan'ireo fandraisana andraikitra hafa ihany koa ireo teknolojia ho an'ny fampandrosoana rehefa injay hanao ireo dingana voalohany mahabe fanantenana handehanana lavidavitra kokoa. Sarotra tohanana amin'ny fomba maharitra ireo tetikasa maharitra sy tokam-pangaro rehefa tsy mifandanja ny fiparitahan'ny fotodrafitrasa miasa aminy, indrindra fa any amin'ny faritra andrenivohitra sy ambanivohitra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/05/29/100828/
 asa nataon'ireo bilaogera marobe miteny sy mampiasa ny teny frantsay: https://rising.globalvoicesonline.org/projects/abidjan-blog-camps/
 ireo firenena afrikana miteny sy mampiasa ny teny anglisy: http://www.afrik.com/article6034.html
 vidin'ny fidirana amin'ny aterineto: http://www.laconscience.com/article.php?id_article=7705
 atelier des médias: http://atelier.rfi.fr/profiles/blogs/1189413:BlogPost:28370
 Toa haingana be ny firoborobon'ireo firenena miteny sy mampiasa ny teny anglisy: http://subsaharska.com/eng/articles/main/nta1257027327/
 Sendikàn'ireo Vehivavy Tantsaha ao Afrika Atsinanana sy ao Tsady : http://resacifroat.blogspot.com/
 ireo tanjon'ny fikambanany: http://resacifroat.blogspot.com/2008/02/l-ufroat-en-question.html
 ny hitahiry ny zon'ireo Malagasy tantsaha: http://bekotopaysans.blogspot.com/
 ireo tantelin'i Madagasikara sy ny ranon-tantely vokariny dia manana toetra mampiavaka azy manokana,: http://bekotopaysans.blogspot.com/2010/04/hstoire-animale-les-abeilles-malgaches1.html
 Manipika izy hoe: http://www.rocare.org/ChangingMindsets/pdf/ch13-ICTandChangingMindset.pdf
 antony fototra miteraka fahataràna amin'ny fampidirana ny NTIC : http://camedevelop.net.over-blog.com/article-informatique-et-education-au-cameroun-48487250.html
 nahafahan'izy ireo naka torohay momba ny andriamby manana tendro roa: http://fasokan.maneno.org/fra/articles/ind1268569169/